Khulisa ukuguqulwa ngokuhlangana kwenhloso yesivakashi
Ukuguqulwa: Hlangana Nenhloso Yesivakashi Sakho
NgoMsombuluko, Januwari 31, 2011 NgoLwesine, Juni 18, 2015 Douglas Karr
Kungabonakala njengombuzo osobala, kepha lapho isiza sakho senzelwe ukuphendula izinhloso zohlobo ngalunye lwezivakashi okwazi ukuguqula okuningi. Izivakashi zizofika esizeni sakho ngezizathu eziningi:
Ukufuna Ulwazi - womabili amaklayenti namathemba kungenzeka ukuthi afuna izimpendulo ezithile. Bangabathola? Uma kungenjalo, bangaxhumana nawe ukuthola izimpendulo?
Discover - kaningi izivakashi zizofika kusayithi lakho noma kubhulogi ngoba zikutholile. Ngabe ukhangisa ngenkuthalo isiza sakho lapho kutholakala khona lokho kutholakala?
Isiphathimandla Sezokwakha - izivakashi zizobuya zizibuze ukuthi ngabe nguwe ngempela yini igunya embonini. Wenzani ukufakazela lokho?
Ukuzuza Ukwethenjwa - izivakashi nazo kungenzeka zingaguquki nawe zize zazi ukuthi uthembekile. Hlobo luni lokusebenzela obala, ukuhlangana, nenethiwekhi okhuthazayo?
Ukukhulisa - Ukukhulisa kudinga konke lokhu okungenhla kepha kuvumela izivakashi ukuthi ziguqule kumugqa wazo wesikhathi ngosizo lwakho. Ngabe unohlelo izivakashi ezingabhalisela ukulunakekela?
Ukuguqulwa kwakho akwenzeki njalo nge- Engeza ekalishini inkinobho! Ukuziphatha kwabavakashi ku-inthanethi kuyinkimbinkimbi kakhulu futhi kuthatha izindlela eziningi ngokusebenzisa isayithi lakho ekuguqukeni. Ukuze usebenzise ngokugcwele iwebhusayithi yakho, kufanele uphakamise isiza sakho lapho sizotholakala khona ngezimpendulo (ngokusebenzisa izinjini zokusesha), maketha isiza sakho lapho sizotholakala khona (Imboni ngobudlelwano obukhulu bomphakathi kanye nenethiwekhi yokuxhumana nabantu), kufanele yakhe igunya (ngamademo, amaphepha amhlophe, ukubhuloga kanye nevidiyo), futhi unikeze indlela yokondla ekuguqulweni (i-imeyili noma izingcingo).
Tags: Ukuhlolwa Komkhiqizo
Isixazululo Sokuphathwa Kwephrojekthi Sababonisi
Isevisi ye-imeyili elula ye-Amazon - I-SMTP efwini